Afhayeenka dowlada oo sheegay in la baarayo dilkii gabadh la afduubtay kadibna la dilay – The Voice of Northeastern Kenya
Afhayeenka dowlada oo sheegay in la baarayo dilkii gabadh la afduubtay kadibna la dilay
Dowlada ayaa shacabka Kenyaanka ah u ballan qaaday in la sameynayo baaritaano xaqiiiqa raadis ah oo ku aaddan dilka loo geystay gabadh ka mid ahayd ardayda jaamacadda Rongo oo horay loo afduubtay.
Arroornimadoo hore ee saaka ayaa meydka Sharon Otieno, laga helay keeyn ku taalo ismaamulka Homa Bay.
Afhayeenka dowlada dhexe Mr. Eric Kiraithe ayaa sido kale cambareeyay isku day lagu doonayay in looga takhaluso wariye ka mid ah howlwadeenada warbaahinta Nation oo lagu magacaabo Barrack Oduor.
Mr. Kiraithe ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Sharon la dilay sido kalena afduubka loo geystay wariyaha looga gol lahaa in isna la dilo.
Shacabka Kenyaanka ah iyo bahda saxaafadda ayuu u xaqiijiyay in baaritaano xeel dheer lagu sameynayo falkaasi.
Agaasimaha waaxda dambi baarista ee dalka Mr. George Kinoti ayaa dhankiisa maamul goboleedka Homa Bay u diray khuburo baaritaano sameynaya.
Gabadhan la dilay ayaa uur lahayd waxayna wararku sheegayaan inuu xiriir jaceyl kala dhexeyay barasaabka ismaamulka Migori Okoth Obado.
Wariayaha ,Barack Oduor ayay dhaawacyo soo gareen kadib markii uu iska tuuray baabuur si xowli ah ay ku kaxeynayeen kooxdii afduubatay iyadoo hadda xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo.
Xoghayaha dhanka warbaahinta u qaabilsan guddoomiyaha ismaamulka Migori ,Nicholas Anyuor ayaa sheegay in barasaabka uusan ku lug lahayn afduubkaasi isagoo intaasi ku daray inuu yahay qorsho la doonayo in siyaasad ahaan sumcaddisa lagu dhaawaco.
Sido kale qaar ka mid ah xildhibaanada haweenka ah ee baarlamaanka oo ay hor kacayso wakiilka haweenka ee ismaamulka Kisumu ,Rosa Buyu ayaa ku baaqay in baaritaano la sameeyo hadii guddoomiyaha lagu cadeeyo inuu falkaasi ku lug lahaana maxkamada la soo taago.
Ciidamo caraysan oo weeraray Taliska gobolka Nugaal. →